दोषि को ? | योगेन्द्र उपाध्याय "पुष्प"
निबन्ध योगेन्द्र उपाध्याय "पुष्प" March 30, 2010, 7:12 am
यूवामा ताकत छ, आँट छ तर नेतृत्व छैन, नेतृत्व गर्ने वृद्ध हो यूवा आँफै हैन । यूवालाई के धर्ममा लगाउ धर्म बनिदिन्छ । पापमा लगाउ पाप बनिदिन्छ । शक्ति छ जे पनि गर्ने । चाहे पापबाट सन्यास लिने चाहे पुण्यबाट सन्यास लिने । दाह््िर सेता भएका वृद्ध जे सिकाउ यूवा त्यहि गरिदिन्छ । सँस्कार सिकाउ सँस्कारै राम्रो । कुसँस्कार मा हिँड्दा नरोके कुसँस्कारै राम्रो । त्यो त वृद्धको हातमा छ हामीलाई पीउन आमाको दुध दिने वा नदिने । नदिए पनि क्यै छैन । पाएजति चीज चुस्छौँ फाल्छौँ । चुस्दा चुस्दै सबै चिज जुठो हुन्छ, रहन्न चोखो क्यै पनि । अझै पनि समय छ वृद्ध ! जुठोलाई चोखो बनाउ अरु जुठो हुनबाट जोगाउ । हाम्रो आत्मामा भोक छ । भर्नु छ पेट चाहे अन्न चाहे माटो । सच्याइदेउ हाम्रो तृप्ति के हो ? सागर प्रकृतिले शान्त नै दिन्छ । छाल आउने हो हावाले । हावा आउँदैछ अजँग सन्सारमा । बचाउ वृद्ध पतिङ्गर समान उड्दैछ यूवा । हाम्रो संरक्षण गरिदिनु । आफ्नो सँरक्षण गर्न सक्दैन यूवाले ! समातेर राख — हाँगाबाट आफू छुट्न त चाहन्न पत्ताले !! तर............